Xildhibaan sheegay in 48kii saac ee la soo dhaafay soo gaarayeen fariimo handadaad… – Hagaag.com
Xildhibaan sheegay in 48kii saac ee la soo dhaafay soo gaarayeen fariimo handadaad…
Posted on 28 Nofeembar 2018 by Admin in National // 0 Comments
Xildhibaan C/llaahi Maxamed Nuur oo ah Xoghayaha Guddiga Maaliyadda ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ayaa sheegay in farriimo handadaad ah ay soo gaarayeen 48-kii saac ee la soo dhaafay.
Xildhibaan C/llaahi Maxamed Nuur ayaa sheegay in farriimaha handadaada uu kala kulmayay dhanka Xukuumadda, isagoo xusay in loogu hanjabayay inuu faraha kala baxo arrimaha maaliyadda dalka iyo doodii ka dhalatay warbixin Miisaaniyadda sanadka ee Guddiga Maaliyadda soo saaray.
“48-kii saac ee la soo dhaafay waxaa isoo gaaray illaa shan farriimood oo qaarkood si bareer ah aniga la igala hor-yimid iyo kuwo meelo kale la isoo marinayay, farriimahaas waxay nooga imaanayeen Xukuumadda”ayuu yiri Xildhibaan C/llaahi Maxamed Nuur.
Waxaa uu sheegay in hey’adaha ay khuseyso uu la wadaagay farriimahaas, isagana uu ka qaatay go’aan sida uu hadalka u dhigay.
Xildhibaan C/llaahi Maxamed Nuur ayaa ka mid ah Xildhibaanada sida weyn u mucaaradsan Xukuumadda iyo Madaxtooyada, waxaa uu ahaa maskaxdii ka dambeysay warbixintii Guddiga Maaliyadda ka soo baxday ee tilmaameysay musuq maasuq iyo hanti fara badan oo maqan, isla markaana uu jiray in si qaldan loo maamulay miisaaniyadda sanadkan 2018.